အဓိကရုဏ်းကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိပြီး မြောက်ဦးဆေးရုံရောက်နေသူ လေးဦးစလုံး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၇- အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိ ကာ မြောက်ဦး ဆေးရုံ၌ဆေးကုသမှုခံယူနေသူ လေးဦး စလုံးထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် သွားကြောင်း ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှသိရသည်။
“တစ်ဦးက ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆင်းသွားတယ်။ ဆရာဝန်ကလည်း ရဲကို သတင်းမပို့ဘူး။ ဒါကတော့ ဆရာဝန် ခွင့်ပြု ချက်ပေ့ါနော်။ နောက်သုံးဦး က ထိန်း သိမ်းပြီးတော့ ကြည့်ရှုနေတဲ့ကြားထဲက ကျွန်တော်တို့က လူသားချင်း စာနာပြီး တော့ လက်ထိတ် ခတ်တာတို့ ဘာတို့မလုပ် ဘဲနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ကြားထဲကနေ သူတို့က ထွက်သွားတာ ” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှူး၊ ရဲမှူးကြီးအောင်မြတ်မိုးက ပြော သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ သုံးဦးပျောက်ဆုံးသွား သောကြောင့် စောင့်ကြပ်ရန် တာဝန်ကျ သည့် မြောက်ဦးမြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်သားတစ်ဦးတို့ကို တာဝန်ပေါ့လျော့မှု ဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အရေးယူ ထားကြောင်းသိရသည်။
“လောလောဆယ် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက် ဆီးမှုနဲ့ အားလုံး ၁၂ ယောက်စလုံးကိုပေါ့နော်။ အမှု ဖွင့်ထားတော့ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆင်းသွားတဲ့ တစ်ယောက်လည်း အကျုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်။ တရားလာရင်ဆိုင်ပေါ့။ တရားရင်မဆိုင်ရင် တရား ခံပြေးသဘောနဲ့ စွဲခံရမယ့်သဘောမှာ ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆင်းသွားတဲ့တစ်ယောက် လည်း ပြေးနေတယ်။ နောက်သုံးယောက် ကလည်း ပြေးပါတယ်” ဟု ၎င်းင်းက ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရက်တွင် ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁၂ ဦးရှိသည့်အနက် ဒဏ်ရာရရှိ သူ ရှစ်ဦးမှာ စစ်တွေ ဆေးရုံနှင့် လေးဦးမှာ မြောက်ဦးဆေးရုံ ၌ ဆေးကု သမှုခံယူခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းင်းတို့ ၁၂ ဦးစလုံးကို ပြည် သူပိုင်ပစ္စည်း ဖျက်ဆီးမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိ ရသည်။
“ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူမှဖမ်းထား တာမရှိသေး ဘူး။ ဆေးရုံမှာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သူတို့ ကျွန်တော့်ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အရေးကြီး သက်သေ အနေနဲ့သူတို့က ပါနေတယ်လေ။ သူတို့ကိုစစ်ဆေးဖို့၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ဒီလူတွေမရှိလို့မရဘူး။ နိုင်ငံတော် ပိုင်ပစ္စည်းဖျက် ဆီးတဲ့အထဲမှာ လည်း ပြစရာဆိုလို့ သူတို့ပဲရှိတယ်လေ ” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အတွင်း ရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေက ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရက် တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရသူ များအတွက် ဥပဒေကြောင်း အရ အကူအညီပေး ရန် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥပဒေ လက်ထောက် ခြောက်ဦးဖြင့် ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည်။
ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်ညတွင် မြောက်ဦး၌ ရခိုင် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာဏာ ကျဆုံးခြင်း (၂၃၃) နှစ်မြောက် ၀မ်းနည်းဖွယ်အထိမ်းအမှတ် စာပေဟော ပြောပွဲပြုလုပ်ခွင့် မရသည့်အပေါ် အခြေခံကာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခုနစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၁၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့သည်။
TS, WYHW /Democracytoday
ထိုင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်မရှိဟု ဆိုကာ လုပ်ကိုင်သူမြ??
”တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ပြီးရင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်” ပန်းရောင်ခြယ်
အာရှယူ-၁၆ ခြေစစ်ပွဲအုပ်စု(H) တောင်ကိုရီးယား ယူ-၁၆ အသင်း ခြေစစ်ပွဲ တိုက်ရိုက်အောင်မြင်
အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလက်မခံဘဲ မီလ်နာကိုလွှဲပေးခဲ့သည့် ဆာလက်
ဂျပန်မှ ပထမဆုံးကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမယ့် အဆိုတော် တာကာဟာရှီဂျူရီ